Uhlaziyo lweveki: Google Chrome, PhotoSync, IKEA kunye nokunye | IPhone iindaba
Uhlaziyo lweveki: Google Chrome, PhotoSync, IKEA kunye nokunye
Iindaba ze-IPad | | Ivenkile yosetyenziso
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo sishicilele inqaku elinxulumene «Iindaba zeVeki». Inqaku apho iqabane lam uLuis likubonise khona ukuba izicelo ezintsha kunye nemidlalo kwiVenkile yeApple okanye iindaba ezinomdla ngaphakathi kwale venkile. Enkosi kweli candelo ungafumanisa malunga nemidlalo emitsha enxulumene nezinto ozithandayo, fumana iindaba ezinomdla ezivela kwiVenkile ye App onokungazi ngayo kunye nezinye iindaba ezinxulumene nemeko yeApple kunye nabaphuhlisi.
Njengeveki nganye, lithuba lakho lokuba ubonise ukuba zeziphi "uHlaziyo lweVeki" endikukhethele zona kule veki: IGoogle Chrome Isikhangeli seintanethi sikaGoogle; IfotoSync, isicelo sokuthumela imifanekiso esuka kwikhompyuter kwi-iPad okanye ngokuchaseneyo; Ikhathalogu ye-IKEA, isicelo esibonisa ikhathalogu ye-IKEA ka-2014; kwaye ekugqibeleni, Isinyithi sentsimbi: IiAces, umdlalo we-adventure kunye neenqanawa ezinemizobo engakholekiyo kunye nomdlalo obalaseleyo.
3 Ikhathalogu ye-IKEA
4 Isinyithi sentsimbi: IiAces
Enye yeendlela esinazo kwiSafari sisikhangeli sikaGoogle: Google Chrome. Inemisebenzi eyahlukeneyo, phakathi kwayo kukungqamanisa okuzenzekelayo kweebhukumaka kunye nohlobo lwe-desktop yeChannel okanye ngeendlela ezahlukeneyo zesikhangeli kwizixhobo ezahlukeneyo: i-Android, ezinye iDevices ... Nantsi imisebenzi emitsha yohlaziyo:
Khetha iimpendulo: Xa sikhangela into kuGoogle kwaye ucofe kwikhonkco ukuya kwiwebhusayithi, sinokufumana into esiyifunayo okanye hayi. Ukuba asiyifumani into ebesiyifuna, cofa nje iqhosha u "Buyela" kwaye iGoogle Chrome izakusibonisa ngokuzenzekelayo iziphumo abasibonise zona kukhangelo lokuqala.
Iindleko zedatha: Ngolu hlaziyo, sinokufumana ukonga iindleko zedatha esizisebenzisayo kulawulo lwe-bandwidth. Esi sixhobo asifumaneki kuzo zonke izixhobo okwangoku, siza kuphunyezwa kancinci kancinci.
Izibhengezo kukhangelo lwelizwi: Ngohlaziyo lwe-Chrome sinokusebenzisa izimelabizo. Ndikunika umzekelo: «Yintoni ikomkhulu laseSpain?» uya kusixelela ukuba iMadrid; emva koko singabuza: «¿Y YaseFransi leyo? » kwaye siya kufumana njengempendulo: eParis.
IfotoSync sesinye sezona zicelo zibalaseleyo zokutshintsha iifoto kunye nekhompyuter yakho. Oko kukuthi, ukusuka kwikhompyuter ukuya kwi-iPad okanye ngokuchaseneyo; Sebenzisa uqhagamshelo lwethu lweWi-Fi ke kubalulekile ukuba zombini izixhobo zixhunyiwe kwinethiwekhi efanayo ye-Wi-Fi; Ukongeza, zombini ezi zixhobo kufuneka zibe nesicelo seFotoSync esifanelekileyo. Masihambe nohlaziyo lwale nguqulo:
Iimbungulu ezilungisiwe: Ingxaki nge-FTP, unxibelelwano lweWebDAV kunye nokuseta iimpazamo ezizinzileyo
Ukhuseleko: Ukhuseleko luphuculwe kwinkxaso yonxibelelwano lwe-SFTP ukugcina ukuthunyelwa kwezithombe kukhuselekile.
Ukuhambisa ngokuzenzekelayo: Irekhodi liye longezwa kwiiNkonzo kunye neZondlo zoLondolozo kwi-AutoTransfer.
Njengonyaka ngamnye, i-IKEA ipapasha ikhathalogu yayo kwisicelo sayo se-iOS: "IKEA Catalog". Ngeli xesha yikhathalogu ka-2014 enezinto ezininzi ezintsha, enye yazo ngumbonisi ongathandabuzekiyo, oko kukuthi, sikhomba kwinxalenye yendlu yethu kwaye i-iPad izakusibonisa ifanitshala esijongana nayo ibekwe kwindawo leyo Sikhomba ngekhamera ye-iPad. Kwaye izisa uhlaziyo ezimbalwa kuhlobo 4.1.1:
Ukulungiswa: Ukulungiselela izixhobo ze-Apple kunye ne-iPhone 5S kunye ne-5C entsha iphuculwe.
IOS 7: Njengoninzi lwezicelo, ziyahlaziywa ukuvumela ukusetyenziswa kwazo kwi-iOS 7.
Isinyithi sentsimbi: IiAces
Ngumdlalo wesibini kwi saga «MetalStorm». Kulo mdlalo mtsha, injongo ihlala ifana kodwa umdlalo weqonga, imizobo, iindlela zomdlalo omtsha, iimeko ezahlukeneyo, iinqwelomoya ezininzi ziphuculwe kakhulu ... Konke oku kusimahla ngaphandle kwendleko zokungena, ewe, zininzi ii-In-App -Ukuthenga okwenza umahluko phakathi kwabasebenzisi kwiZiko leMidlalo. Uhlaziyo kule nguqulo lubanzi:
Imaphu ezintsha: Iimephu ezintsha ziye zaziswa ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo: I-Versus kunye ne-2vs2. Ezi meko zibizwa ngokuba sisiXeko kunye neCanyon.
Umlingisi: Ukusukela ngoku ukuya phambili sinokufumana imidlalo engcono ngokukhawuleza ngokusebenzisa iMarkmarker, ephuculweyo kule nguqulo.
IOS 7: Njengekhathalogu ye-IKEA, i-MetalStorm ihlaziywa ngokulungisa umdlalo kwi-iOS 7.
Umoya womoya: Enye yezinto zokuqala endizibonayo zisebenzisa i-AirDrop (into entsha kwi-iOS 7). Ngoku sinokongeza abahlobo abasenyongweni kumdlalo wethu ngokuvula lo msebenzi kwiZiko loLawulo le-iOS 7 entsha.
Olunye ulwazi-Iindaba zeVeki kwiVenkile ye App: intwana yayo yonke into
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Ivenkile yosetyenziso » Uhlaziyo lweveki: Google Chrome, PhotoSync, IKEA kunye nokunye
Ukulungele ukuphucula kwi-iOS 7? Yonke into ekufuneka uyazi ngaphambili.
Aphi amanzi am? 2 ibetha Ivenkile yeeVenkile, umdlalo ofanayo kodwa ngamanqanaba amaninzi